August 3, 2019 - Pardeshi Khabar
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री सिंगापुर प्रस्थान
Post by: परदेशी खबर प्रकाशीत मिति: August 3, 2019
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन्। ओलीले सिंगापुरको सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने छन्। उनी सिंगापुरको नियमित उडान सिल्क एअरमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्रीको समग्र स्वास्थ्यको परीक्षण सिंगापुरमा हुनेछ। अहिले उहाँको बसाई एक साता तय भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटल (एनयुएच) ले प्ररीक्षणमा कति समय लगाउँछ त्यही आधारमा बस्नु हुनेछ।’ सिंगापुरको सरकारी अस्पताललाई न्युयोर्कमा रहेका ख्यातीप्राप्त निजी एवं सरकारी अस्पतालसँग तुलना गरिन्छ। यसअघि उनले आफ्नो उपचार दिल्ली, थाइल्याण्ड र सिंगापुराम गराउँदै आएका थिए। फुर्सदमा
नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाती महासंघ कतारमा जोडिए दुई भात्रृ संस्थाहरु
परदेशी खबर/ अगस्ट ३, दोहा। दोहा स्थित नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारले हिजो मिति2अगष्ट 2019 शुक्रबार एक बिशेष कार्यक्रम गरी ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद शाखा कतार र नेपाली प्रवासी दराई सङ्गठन कतार दुई सामुदायिक भात्रृ संस्थालाई सहभागी गराई महासघंमा आवद्ध गराइको छ । महासंघ कतारका अध्यक्ष शिव कुमार भुजेलले महासंघका सल्लाहकारहरु र महासंधमा आबद्ध विभिन्न भात्रृ संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारिहरुको उपस्थितिमा थप नयाँ दुई भात्रृ संस्थालाइ भव्य स्वागत गर्दै महासंघमा जोडिएको हो । संस्थाका सस्थापक सदस्य दिल किरण खजुम लिम्बुले महासंघको सम्क्षिप्त इतिहास बताउदै अब यसरी नैफुर्सदमा
ताजपुरिया समाज कल्याण परिषद शाखा कतार, नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासङ्घ, नेपाली प्रवासी दराई सङ्गठन कतार ताजा खबर, नेपाली खबर, प्रवास, फोटो ग्यालरी No Comments »
बढी ब्याज लिने सहकारीलाई ५ लाखसम्म जरिवाना
काठमाडौं : सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएका छन्। सहकारीले सदस्यबाट १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिए कारवाही हुने भएको हो। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार गठित सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रबार सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार बचतकर्ताले समेत राहत पाउने भएका छन्। अब सदस्यले सहकारीमा बचत गर्दा १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाउनेछन् भने कर्जा लिँदा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नुनपर्ने भएको छ । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न कडाइका साथ अनुगमन गरिने बताए। ‘तोकिएको ब्याजदरभन्दा बढी लिएको पाइए कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ’,फुर्सदमा
प्रहरीविरुद्ध विप्लवको ‘पक्राउ पुर्जी’ ! नटेरे ‘इन्काउन्टर’ को चेतावनी
टीकापुर : प्रहरीले देशभर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइरहेका बेला कैलालीमा विप्लवको पार्टीले प्रहरीविरुद्ध नै ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको छ। ‘जनअदालत’ को नाम दिएर नेकपाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक असईलाई ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको हो। कैलाली जनअदालत प्रमुख विकासको नामबाट शुक्रबार जारी पक्राउ पुर्जीमा राष्ट्रिय अनुसनधान विभागका असई भैरव कुँवरलाई ‘२५ दिनभित्र उपस्थित हुन’ भनिएको छ। कुँवरको घर आसपास सार्वजनिक स्थानहरू टाँसिएको उक्त पुर्जीमा लेखिएको छ– ‘कैलालीको वर्दगोरीया गाउँपालिका–१ साझा भन्ने ठाउँमा बस्ने नवराज कुँवरका छोरा भैरव कुँवरलाई २५ दिनभित्र जनअदालतमा उपस्थित हुन पक्राउफुर्सदमा
कुवेतमा सुतेकै ठाउँमा एक नेपाली कामदारको निधन
परदेशी खबर/ अगस्ट २,कुवेत । कुवेत स्थित मंगाफमा एक नेपालीको सुतेको ठाउँमै निधन भएको छ । निधन भएको कारण भने खुल्न सकेको छैन । करिब तिन वर्ष अगाडी कुवेतको हिसको कम्पनीमा रोजगारीको लागि आएका बेनी नगरपालिका वार्ड ९ का कुलाबाहादुर चोखालाको निधन भएको हो । करिब १४ महिना देखि कम्पनि छाडेर अवैधानिक रुपमा बाहिर काम गर्दै आइरहेको बुझिएको छ । मृतकको बारेमा नेपाली राजादुतावास कुवेतले आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको र पक्रिया पुर्याएर मृतकको शव नेपाल पठाउने जानकारी परदेशी खबरलाई दिएको छ ।
कुवेत, ताजा खबर, नेपाली खबर, परदेशी समाचार, प्रवास, फोटो ग्यालरी No Comments »
सुराकी नराेके ‘इन्काउन्टर’ गर्ने चेतावनी सहितको प्रहरीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
कैलाली, १८ साउन । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरोका असई कैलाली बर्दगोरिया–१ का भैरव कुँवरलाई इन्काउन्टरको चेतावनी दिएको छ । आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि सुराकी गरेको भन्दै विप्लव समूहले कुँवरलाई सुराकी नरोके इन्काउन्टर गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो । प्रहरीले देशभर विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइरहेको समयमा विप्लव समूहको कैलाली जनअदालतले प्रहरीविरुद्ध नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । विप्लव समूहले विज्ञप्ति नै निकालेर कुँवरलाई सुराकी नरोके इन्काउन्टर गर्ने चेतावनी दिँदै २५ दिनभित्र पक्राउ गर्ने जनाएको छ ।
एउटा मुद्दा लड्न गाडी भाडा मात्रै १४ लाख
उदयपुर, १८ साउन । जिल्ला अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसलाले आफु अन्यायमा परेको भन्दै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११ चप्पनकी देवीमाया कटुवाल निर्णय बदरको माग गर्दै ३ वर्षदेखि उच्च अदालत ओखलढुंगा धाइन् । सरकारवादी यस मुद्दामा उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णय सदर ग-यो । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले समाचार छापेकाे छ । देवीमायासँग अदालतको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । अझै अदालत धाउँदाको खर्च र पीडा थेगी नसक्नु भयो । अदालत धाउँदा ३ वर्षमा गाडी भाडा मात्र १४ लाख रुपैयाँ बुझाएको उनले बताईन् । खान, बस्न र कानुन व्यवसायीको खर्च बेग्लै छ । ‘भौगोलिक विकटताले जानआउन रफुर्सदमा
काठमाडौं, १८ साउन । सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसदका दुवै सभाका सदस्यसम्मको मासिक तलबभत्ता १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साउन १ देखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा साउन १ देखि लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक (कर्मचारी) हरूको तलब वृद्धि गरेको थियो । कार्यालय सहायकदेखि नायब सुब्बासम्मको २० र शाखा अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यति बेला सरकारले विशिष्ट पदाधिकारीहरूको तलब वृद्धिफुर्सदमा
काठमाडौं, १८ साउन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प भएको आठ महिना भयो । करिब ९७ प्रतिशत काम सकिएको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पूरा भए संघीय राजधानीका लाखौं बासिन्दा पिउने पानीको दैनिक समस्याबाट मुक्त हुने थिए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ । तर उपत्यकावासीलाई यो समस्याबाट छुटकारा दिलाउने जिम्मा पाएको खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व लिइरहेकी मन्त्री बिना मगरको प्राथमिकता भने मेलम्चीमा भन्दा अन्तै बढी भएजस्तो देखिएको छ । गत पुसमा मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रिभेन्नाले ठेक्का तोडेयता आयोजनाका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यसको करिब ६ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नयाँ ठेकेदार कम्पनीफुर्सदमा
दोलखाको गौरीशंकरमा भीषण पहिरो, १० घर पुरिए
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: August 3, 2019
अगष्ट ३,काठमाडौं । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–१ जुगुको झगडेमा भीषण पहिरो गएको छ । शुक्रबार राति गएको पहिरोबाट १० घर भत्किएका छन् । केही घर पुरै पुरिएका छन् । पहिरोको कारण २ जना सम्पर्कविहीन भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरीका प्रहरी नायब निरीक्षक ( सई) बद्री नेपालीले जानकारी दिनुभयो । यो समचार आजको जनबोली न्युजमा प्रकाशित भएको छ। सोही ठाउँका ५५ वर्षीय जगतबहादुर खत्री र १६ वर्षीय निशान खड्का बेपत्ता रहेको सई नेपालीले जानकारी दिनुभयो । उद्धारका लागि काठमाडौंबाट सेनाको हेलिकोप्टर जाँदै गरेको बताइएको छ ।